Rosia: Fipoahana volokano niteraka fifanampiana sy hanihany · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 21 Avrily 2010 21:46 GMT
Vakio amin'ny teny Français, 繁體中文, 简体中文, Español, polski, Nederlands, বাংলা, English
Roa andro izay dia naneho ny heriny Ramatoa Natiora tamin'ny alalan'ny fipoahan'ny volokano tany Islande nomena anarana tsy fantatra hoe “Eyjafjallajökull” ary nameno setroka be ny lanitry Eoropa. Arakaraky ny hikisahan'ny rahona miantsinanana dia seranam-piaramanidina maro no mikatona, mitarika any amin'ny fitotonganan'ny zotra rehetra manerana an'i Eoropa. Ny mpitoraka bilaogy rosiana – voakasik'ity loza voajanahary ity koa – no maneho hevitra samy hafa: manadrohadro, mizara vaovao, maneho fahasamihafana, ary manolo-tanana hifanampy.
Ny resaka tena mafana dia ny tao amin'ny Livejournal ru_travel (eo ho eo amin'ny mpamaky 30,000 eo). Voatery nametraka tag manokana hoe “volcano” ny tompon'andraikitra hanamorana ny fidirana an-tserasera mailaka mikasika ity volokano ity. Mifanampy ny mpitoraka bilaogy amin'ny fanomezana ny zon'ny mpandeha, ny fomba fanaon'ny zotram-piaramanidina, ny trano fandraisam-bahiny sy ireo lalana an-tanety.
Mpitoraka bilaogy manokana no manolotra fanampiana amin'ny fizarana vaovao fotsiny. Lacrizza manolo-tanana [RUS] haka olona vitsivitsy eny amin'ny seranana Sheremetyevo any Moscou ary manome azy ireo vahaolana vonjy maika. Nata_vasilisa manao toy izany koa any Krakow, Poland [RUS]:
Raha misy aminareo mikatso ao Cravocie vokatry ny volokano ary tsy mahita toerana aleha dia afaka mampiantrano aho.
Tafiditra ao anatin'ny resaka koa ny filokana. Lj-user asy nanolotra [RUS] folokana ny amin'ny daty hifaranan'ny fanafoanana ny sidina any Eoropa. Indro ny tena niavaka tamin'izany:
Satria mety ho foana ny sidina amin'ny 99% ny vintana, dia hataoko ny filokana fa ho foana tanteraka ny fanafoanana sidina amin'ny 3 na 4 may. (Azo antoka fa ho banky ihany ny ankamaroan'ny zotram-pitanterana mandrapahatongan'izay).
Manana tapakila ho any Paris aho amin'ny 9 may. Hataoko fa manam-bitana 50% aho amin'izay. Hataoko anefa fa efa tonga ny faran'izao tontolo izao – noho izany… heveriko fa tsy misy na inona na inona hanidina intsony.
Allevtinka mamaly somary masiaka:
Izany mihitsy! Ny farany nipoahan'ny volokano indroa nifanesy tanatin'ny 2 taona (200 taona lasa izay. Raha 2010 +2 = 2012) dia mora kely izany!
ingushetiya_ru mitanisa ny voalazan'ny Coran ny amin'ny fifaranan'izao tontolo izao:
Ho tonga ny Andro raha misy setroka mandrakotra ny lanitra.
Yuri-yum milaza [RUS] fa ity fipoahana volokano ity dia mbola “Sodoma” aloha fa tsy mbola ny Fitsarana Farany. Mamely ambadika ny praiministra islandais Johanna Sigurdardottir izy amin'izany, mpitondra fanjakana pelka voalohany [ENG].
Tena resabe ao amin'ny tontolon'ny bilaogy ny Fara andro. Mizara sary navoakan'i Vladimir Manyukhin [RUS] ny sasany izay maneho an'i Moscou aorian'ny “ririnina nokleary”:
Ny Kianja Mena Apokalyptika, sarin'i Vladimir Manyukhin
dmitrivrubel manoratra [RUS]:
Miaraha amin'ny zotram-piaramanidina “Eyjafjallajökull”! Nahoana no mbola tsy nisy mozika ihany, tsy nisy sary ahetsika, na farafaharatsiny fahatsiarovana? Toa an'ilay tsy lehibe tsy manam-paharoa – Andriamatoa Eyjafjallajökull. Miaraka amin'ny vadiny Mirdal'sjekjudl’, izay mbola tsy taitra.